Chọpụta ala mara mma mara mma na Spain | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | España, njem
Na obodo anyi anyi huru ọtụtụ echiche dị iche iche ma a bịa n'ihe banyere ịpụ iche. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado nke okike, ị ga-achọ ịga njem na ịchọ ala kachasị mma. Ya mere, anyị ga-achịkọta ala ndị mara mma nke ukwuu na Spain, nke dị ọtụtụ ma nwee ọtụtụ ọdịiche.
Site n'ụsọ oké osimiri gaa n'ugwu ugwu na-agafe ebe echedoro anyị achọtala ezigbo ihe okike. Maka na ọ dịghị mkpa ịga ebe dị anya ma ọ bụrụ na anyị na-achọ ọdịdị ala nke masịrị anyị. Mee ndepụta nke njem ndị ahụ niile ị nwere ike ime iji chọpụta oghere ndị a dị nso.
1 Osimiri Katidral
2 Caves nke Drach
3 Mmiri nke Covadonga
4 Ogige Ntụrụndụ Teide
5 Agwaetiti Cies
6 Royal Bárdenas
7 Ohia Irati
8 Garajonay National Park
Las Catedrales osimiri dị na Galicia, n'ụsọ osimiri Lugo n’obodo Ribadeo a na-akpọkwa ya osimiri osimiri Aguas Santas, ọ bụ ezie na ọ dịghị onye maara ya n'ụzọ ahụ taa. Ọ pụtara ìhè n'ihi na mgbe ebili mmiri buliri ya, mmiri ahụ kpuchiri ya kpamkpam, bụ nke kpụziri ọdịdị nke ugwu ndị na-enye ya aha. Cheslọ ndị ahụ na usoro ndị a dị ịtụnanya n'ihi na ha bụ ihe okike ma dọta mmasị ọtụtụ narị mmadụ. Ugbu a ikike dị n'ụsọ osimiri nwere oke iji zere mmebi, yabụ ị ga-edebe ma ọ dịkarịa ala ụbọchị 45 tupu oge eruo. Ọ dịkwa mma ilele usoro oge na-adịghị anya iji gaa oge mgbe ị nwere ike ịgbada n'ụsọ osimiri.
Caves nke Drach
Ọgba ndị a dị n’agwaetiti Mallorca, n’obodo dị n’ụsọ oké osimiri nke Porto Cristo. Ha dị mita iri abụọ na ise n’ogologo na otu puku na narị abụọ na ọkara. O nwere ọdọ mmiri dị n'okpuru ala, Ọdọ Mmiri Martel. Ọbịbịa ndị ọgba ahụ gụnyere ịgagharị na-eduzi nke ha na-agwa anyị etu esi achọpụta ma pụta. Mgbe ị rutere n’akụkụ, ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọmarịcha egwu na ndị egwu na-abịa n’ụgbọ mmiri ma n’ikpeazụ anyị nwere ike ịga n’ikpere mmiri nke ọzọ site na ịgafe mmiri ma ọ bụ banye n’ụgbọ mmiri.
Mmiri nke Covadonga
Ndị a Ọdọ mmiri ndị mara mma dị na Ogige Eke Picos de Europa. E nwere ọtụtụ ụzọ ụkwụ na-eme anyị ohere isi na-agagharị n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ ma hụ gburugburu. Ha bụ ọdọ mmiri mmiri mara mma nke oge ochie nke taa na-etolite ọtụtụ ọdọ mmiri. Ọdọ mmiri Enol na Ọdọ Ercina bụ ndị kachasị ibu na enwere pere mpe, Ọdọ Mmiri Bricial. Na gburugburu ị ga-ahụ ọtụtụ ehi na-ata ahịhịa nwayọ nwayọ. Ebe ọzọ ị gara nso bụ Santa Cueva na Basilica de Santa María la Real.
Ogige Ntụrụndụ Teide
Odude ke Isuo Tenerife, nke a ogige mba na-ebili na ugwu ugwu Teide, nke bụ ebe kachasị elu n'àgwàetiti ahụ. Can nwere ike ịnụ ụtọ ala mgbawa ugwu nke dị iche na nke pụrụ iche na kwa ịrịgo ugwu Teide site na ọchị. N'elu elu ị nwere ike iru n'elu ma ọ bụrụ na anyị rịọrọ ikike tupu oge eruo, ebe ọ bụ mpaghara amachibidoro ndị ọbịa ole na ole kwa ụbọchị.
Agwaetiti ndị a dị na Galicia n'ụsọ Oké Osimiri Atlantic na Ha bụ akụkụ nke National Park nke Atlantic Islands nke Galicia. A na-akpọkarị Cíes Islands, ọ bụ ezie na e nwere ndị ọzọ nọ n'ogige a dịka Ons, Sálvora ma ọ bụ Cortegada. Iji garuo Cíes Islands, ị ga-ebu catamaran pụọ n'ụsọ Oké Osimiri Galician. Agwaetiti a nwere oke osimiri dị egwu dịka Rhodes na obere obere ugwu ndị ọzọ. Ihe ị ga - eme bụ ịnọ otu ụbọchị na agwaetiti ahụ iji hụ ọdịda anyanwụ site na ọkụ ọkụ, otu n'ime ebe kachasị elu ya.
Ebe ọdịda anyanwụ a dị na Navarra ma dịkwa nke ejiri ájá, gypsum na ụrọ mee na ifufe na mmiri na-agba agba ruo mgbe ha mepụtara ụdị ụfọdụ. Anyị nwere ike ịhụ ugwu, ndagwurugwu na ala dị larịị na mbara ala dị nnọọ iche n’ebe ọ bụla ọzọ. Knowndị a maara dị ka Castildetierra na-apụ apụ ma nwee ọtụtụ ụzọ akara aka nwere ike iji ụkwụ mee.
Ebe ọdịda anyanwụ a dị na Navarra ma ọ bụ nke abụọ nnukwu beech na ọhịa fir na Europe, na ọnọdụ nchekwa kacha mma. Ọ dị na Pyrenees ọwụwa anyanwụ na mpaghara ị nwere ike ịme ịgba ịnyịnya ígwè na ụzọ njem njem ebe ọ bụ na e nwekwara ọtụtụ echiche ntụgharị dị ka Ariztokia.
Ogige a Ọ dị n'àgwàetiti La Gomera na Canary Islands. O nwere akụkụ ụfọdụ mpaghara ebe ọ bụ na ọ gbatịpụrụ na etiti ya na akụkụ ugwu nke agwaetiti ahụ. Ọ na-apụta n'ihi na o nwere oke ọhịa laarian nke Canarian, ihe ndị sitere n'okike nke dịrịlarị ọtụtụ puku afọ gara aga na Tertiary Era na nke furu efu na kọntinent ahụ mana ọ ka nọ ebe a, yabụ ọ dị oke mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Okirikiri ala mara mma na Spain